अहिले सम्मकै यस्तो महान काम गरिन् २५ वर्षीय यी युवतीले ! तपाइ हामीले पनि केहि सिक्ने कि ? – Complete Nepali News Portal
अहिले सम्मकै यस्तो महान काम गरिन् २५ वर्षीय यी युवतीले ! तपाइ हामीले पनि केहि सिक्ने कि ?
सो अवसरमा कृतिका आमा उर्मिला श्रेष्ठले छोरीले सानै उमेरमा सामाजिक काममा देखाएको ईच्छाले आफुलाई निकै खुसी तुल्याएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले उनले घोषणा गरेको खाजाको कार्यक्रममा आफुले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष आफुले विद्यार्थीहरुलाई १ वर्षको खाजाको लागि आर्थिक सहयोग गरेको र त्यहि देखेर छोरीले आफुले आफ्नो खाजा खर्च र फजुल खर्च कम गरेर विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्न चाहेकाले पोखरा देखि धितालसम्म पुगेर सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
लायन्स क्लब लगायतका विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरीरहेको भएपनि आफ्नै छोरीले सामाजीक काममा अग्रसर भएर लाग्दा आफुलाई निकै खुसी लागेको उर्मिलाको भनाई रहेको छ ।